Morning Brain Workout: 5 Imikhuba Elula Ezokwenza Usuku Lwakho Lukhiqize - Psychology 2022
Morning Brain Workout: 5 Imikhuba Elula Ezokwenza Usuku Lwakho Lukhiqize
Dala umkhuba wakho wasekuseni
Ungamoshi "ihora lakho legolide"
Bhala amakhasi ekuseni
Sebenzisa amafomula e-self-hypnosis
Ekuseni isikhathi esikahle sokuqala ukuphila ngendlela entsha.
Njalo ekuseni impilo isinikeza elinye ithuba lokushintsha indlela kanye nethuba elisha lokucabanga ngendlela ehlukile kunayizolo. Ngakho-ke, ukufudumala kwasekuseni okulungile kobuchopho kubaluleke kakhulu.
Cabanga ngalokho ofuna ukukwenza njalo ekuseni, futhi uguqule lesi senzakalo sibe uhlobo lwesiko. Isibonelo, vuka ngo-6.00 ekuseni uvule irediyo yakho eyintandokazi, noma wenze umdanso oshisayo ukuze uzijabulise.
Umlobi uRobin Sharma uthi ihora lokuqala losuku ngemva kokuvuka libaluleke kakhulu. Ngakho-ke, kuyalulekwa ukuthi unikele lesi sikhathi ekuzithuthukiseni futhi usebenze ngokwakho. Lokhu akusho ukuthi udinga ukuvula i-TV noma uvule i-laptop ngemva nje kokuvuka - lokhu kuzolayisha ubuchopho bakho ngolwazi olungadingekile. Kunalokho, zinike isikhathi sokuzindla, ukubhala amanothi omuntu siqu, nokufunda amakhasi ambalwa encwadi ekhuthazayo.
Yenza ukubhala imicabango yakho ebhukwini lokubhalela kube isiko lansuku zonke ngaphambi kokudla kwasekuseni neminye imisebenzi. Lokhu kucishe kufane nokugcina idayari yomuntu siqu: bhala imicabango yakho, imicabango, izinhlelo, izifiso, bhala imicimbi. Le nqubo ikukhulula emicabangweni engadingekile, ikuvumela ukuthi uphathe kahle ulwazi, ugxile entweni eyinhloko.
Amafomula e-self-hypnosis abizwa ngokuthi iziqinisekiso ezisiza umuntu ukuthi asuse imicabango emibi futhi alalele igagasi elihle. Ngakho-ke, ekuseni kuyasiza ngempela ukusho iziqinisekiso ezinhle kuwe, isibonelo: "Nsuku zonke zami ziyiholide!", "Nsuku zonke ngijabulela ukuphila," "Ukuphila kuyisipho esihle."
Ekuseni isikhathi esingcono kakhulu sokuhlela. Kungalesi sikhathi sosuku lapho kuphumelela khona ukusetha izinjongo zosuku nokuhlela uhlelo lokuzisebenzisa.
TOPIC: Ososayensi baqhamuke nesivivinyo esilula ukuze bahlole i-charisma yabo
6 imikhuba emibi okufanele uyilahle: funda ukuthi ungayenza kanjani
Umuntu ngamunye ulwela ukuzazi futhi azuze impumelelo. Nokho, imikhuba emibi noma ukuziphatha kuvame ukubaphazamisa. Ngakho-ke, izazi zokusebenza kwengqondo zasiza ekutholeni lezo zici ezivame ukuthinta ukuqaliswa kwemibono
Ngesitayela esithi "Ubuhle Nesilwane": I-Darynok izogubha uSuku Lwezithandani
NgoFebruwari 13 no-14, imakethe yezitolo "i-Darynok" izothatha izivakashi zibe enye yezindaba zothando zothando - inganekwane ethi "Beauty and the Beast". Izivakashi zizohlangana no-Belle no-Beast, uLumiere noGaston; uzokwazi ukuhlalela itiye, njengasenqabeni yenkathi ephakathi
TOP 7 imikhuba engabonakali ebangela ukuthi sikhuluphale
Akukhona nje kuphela ukudla ngokweqile okuphazamisa ukulahlekelwa isisindo, kodwa futhi neminye imikhuba. Nansi imikhuba engu-7 engahlanganisi ukudla, kodwa ekuvimbela ukuthi ungabheki isibalo sakho esiphelele
Indlela yokwandisa ukuzethemba kowesifazane: imikhuba ephumelelayo yesazi sokusebenza kwengqondo uVladimir Naumenko
Ukuzethemba kwakheka esemncane. Singakuthonya ngandlela thile ngemva kweminyaka eminingana? Yebo! Indlela yokwandisa ukuzethemba futhi uthole ukuzethemba, kusho isazi sokusebenza kwengqondo uVladimir Naumenko
U-Irina Bilyk utshele ukuthi umelana kanjani nokuhlukana njalo nomyeni wakhe u-Aslan Akhmadov
Umculi u-Irina Bilyk nomqondisi u-Aslan Akhmadov sebeshade iminyaka emihlanu, bakhulisa indodana yabo uTabriz, kodwa abavamile ukubonana, ngoba bahlala emazweni ahlukene. Umbhangqwana ubhekana kanjani nokuhlukana njalo?
Landela ezinyathelweni zikayihlo! U-Oleg Vinnik waba nesandla ekusindiseni ukuphila
Umculi onesibindi u-Oleg Vinnik ogqoke ihembe elingenazinkinobho ubonise indlela anikela ngayo ngegazi. Muva nje, umdwebi ujoyine umsebenzi obalulekile womphakathi
U-Vitaly Kozlovsky ukhiphe ividiyo evusa inkanuko uMala
Umculi wase-Ukraine u-Vitaly Kozlovsky wethule umsebenzi omusha wevidiyo. Kuvidiyo yengoma ethi Mala, ungabona izithombe ezinhle zaseKiev, kanti ezinye zazo, zisuka engeli engajwayelekile